Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya oo olole ku wada ICC si ay dawladaha Afrikaanka ah uga baxaan
Itobiya oo olole ku wada ICC si ay dawladaha Afrikaanka ah uga baxaan
Markii la xukumay Charles Taylor oo ka noqday M/W dalka Liberia kana qayb qaatay dadkii badnaa ee lagu laayay waddanka Sir Leon, ayuu Xeer-ilaaliyihii Maxkamadii SCSL ee loo saaray qadiyadaa Mr. David Crane, wuxuu yidhi; “Xukunkan wuxuu digniin u yahay caalamka oo idil. Hadaad M/weyne ka tahay dal, isla markaana aad shacabkaaga laynayso ku talagal inaad tahay midka ku xiga ee maxkamaddan la soo taagi doono” (David Crane, the chief prosecutor of the SCSL correctly pointed out, “This is a bell that has been rung and clearly rings throughout the world. If you are a head of state and you are killing your own people, you could be next.”). Xoghayaha Guud ee QM Mr. Ban Ki-moon isagana wuxuu yidhi; “Arintan waxay digniin culus u diraysaa dhamaan madaxda caalamka in lagula xisaabtamayo siday ula dhaqmaan shacabkooda” (“(it) sends a strong signal to all leaders that they are and will be held accountable for their actions”.Ban Ki-moon”
Maxkamadda caalamiga (International Criminals Courta ICC) waxaa lagu asaasay caasimadda Talyaaniga ee Rome 2002, waxayna xarun ka dhigatay caasimadda Holland ee Hague, waxayse ku qaadi kartaa maxkamadeeda meel kasta oo caalamka ka mid ah. Waxaa ka mid noqday oo saxiixay ilaa 122 dal oo kala ah, dhamaan wadamada Koonfur Amerika, dhamaan wadamada Yurub, sidoo kale ilaa kala badh dalalka Afrika. 31 dal oo Ruushka uu ka mid yahay ayaa ogolaaday hasa ahaatee aan weli saxiixin. Wadankii ogolaada oo saxiixa waxaa ka reeban inuu sameeyo wax kasta oo ka soo horjeeda xeerka lagu dhisay maxkamadda ICC. Wadankii doonaya inuu ka boxo xor ayuu u yahay inuu ogaysiiyo QM inuu ka baxay balantii uu qaaday.
Itobiya waxay ka mid tahay dawladaha aan saxiixin kolkii horeba, hadana waxay ugu jirtaa olole inay ka saarto dawladaha Afrika ee ka midka noqday maxkamadda ICC iyadoo ku andacoonaysa in madaxda lagu soo oogay dambiyada ama la xukumay 99% ay yihiin Afrikaan. Waa mararka ay Itobiya iyadoo iska dhigaysa inay difaacayso xuquuda Afrikaanka ay awrkeeda ku kacsato. Nasiibdarada haysata Afrikana waxaa ka mid ah in aanay arkinba laba wajiilanimada Itobiya oo iyadoo ka mid ahayd dawladihii qaybsaday Afrika ee gumaystay, oo ka mid ahayd dawladihii ka ganacsaday adoonsiga oo dad Afrikaan ah ka iibsan jiray Yurub, hadana u arka inay tahay dawlad xoriyad doonkii shucuubta Afrika qayb weyn ka soo qaatay.
Hadaan ku soo noqono mawduuca, R/wasaaraha Itobiya isagoo ka faa’idaysanaya dacwada lagu soo oogay M/weynaha dalka Kenya Uhuro Kenyatta oo maxkamadda hortaala hadda ayuu shirkii Midowga Afrika arintan kaga hadlay isagoo leh waxay muujinaysaa dacwadda loo haysto M/weynaha Kenya in Afrikaanka loo dan leeyahay, wuxuuna raaciyay mar uu la hadlayay idaacadda BBC-da in loo wakiishay inuu QM kala hadlo arinta loo haysto M/weynaha Kenya. hasa ahaatee, arinta dhabta ah ee ka dhawaajinaysa Itobiya ma’aha cadaaladda maxkamadda ICC inay dood ka qabto, ee waa in aan laba soo qaadin dhibaatada lagu hayo shucuubta Afrika, taasoy uga dan leedahay in ay iska moosto maxkamadda oo aan dhankeeda la soo eegin, waxayna sidii dhaqanka u ahayd ku gabanaysaa oy doonaysaa inay ku kiciso dawladaha Afrika –Midab takoor (Racist) ayaa lagu wadaa Afrika-. Hadafka Itobiyana waa inay Afrika awrka ku kacsato. Bal aan dhowrno.